Dibadbaxayaal lagu xiray Hong Kong - BBC Somali
Dibadbaxayaal lagu xiray Hong Kong
Dhaqdhaqaaqa dimuqraadiga Hong Kong ayaa dib ugu laabtay qaar ka mid ah goobahoodii dibadbaxa intii uu socday isku dhac dhexmaray booliska.
Kumanaan dibadbaxayaal ah, qaarna ay xiran yihiin indhogashiga wax celiya iyo koofiyadaha madaxa ilaaliya ayaa galay xayndaabyo dib loo dhisay deegaanka Mong Kok. Booliska ayaa adeegsaday ulahooda iyo waxyaaba dadka ilmada ka keena.
15 sarkaal ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen, waxaana la xiray 26. Madaxa booliska Hong Kong, Andy Tsang, ayaa dhaliilay dibadbaxayaasha isagoo ka digay dhaqanka ceynkaas ah inuusan nabad aheyn, uuna qatar galinayo ammaanka guud.
Hogaamiyaha dibadbaxayaasha ayaa sheegay amarka uu bixiyay madaxa fulinta Hong Kong C. Y. Leung, ee lagu qaaday teendhooyinkii ay ku dibadbaxayeen ay caqabad ku noqotay wadahadalka. Dibadbaxayaasha ayaa u doonaya Hong Kong dimuqraadiyad buuxda. Shiinuhuna wuxuu ku adkeystay inay leeyihiin hadalka ugu dambeeya cidda xukumeysa doorashada tooska ee 2017ka dhaceyso.